WAA HABEEN WAA KA BARYAY CODKA RAYAALE KA RABO REER AWDAL « SAWNEWS NETWORK
« Here Stops The Bugs!!
WIXII LA QARIYABA QUDHUN BAA KU JIRA »
WAA HABEEN WAA KA BARYAY CODKA RAYAALE KA RABO REER AWDAL
Barri hore waxa ka jiray gayiga Gadabursiga boqortooyo ku dhisan dimoqraadiyad, kala dambayn, xaqdhowr, iyo istixgelin. Bogortooyaddu waxay daafici jirtay danaha guud ee ummada, waxay ilaallin jirtay degaanka ummada, waxay xeerin jirtay daris wanaaga. Boqorka iyo tobanaan kale oo ka mid ah ummada ayaa hogaamin jiray ummada. Boqortooyadu waxay ka koobnayd qabaa’ilka degan degmadaas. Waqtigaas boqortooyado waxay ahayd waqtigii dadka degmooyinkaas degani ugu xooganaayeen, isku jeclaayeen, ee ay kala dambayn jireen.
Dowlada badan ayaa ina soo marey laga soo bilaabo 1960kii. Hase yeeshe Adal iyo wadanka Somaaliyeed intiisa kale waxa u dhexeeyey sataar xadiid ah oo an ka fugayn magaala madaxda Adal. Waxaase jiray siyaasiyiin ka fikira danta guud ee ummada Adal. Siyaasiintaasi waxay la xidhiidhi jireen dadka soo doortay iyo meesha laga soo doortay. Waxay aaminsanaayeen dadkooga.
Haddaba maanta maxaa ka dambeeyey waqtiyadaas. Waxa la leeyahay Dowladbaa ka ka jirta wadanka Somaaliland. Madaxweynuhu wuxu ka soo jeedaa Adal, hase yeeshee sataaral xadiidkii oo laba jibaarmay ayaan ku xeeran. Masoo dhaffi karo xadkaas oo ma iman karo Adal. Wuxuu noqday ninkii la yiri wuu baxay oo ma soo noqonaayo (Kharaj wa lam yacud ). Ma faalbaa u qabtay in u iska ilaaliyo Adal iyo dadkeeda? Ma cudurbaa loogu sheegay beeshaas? Ma ka dhabbaa mise waaba ka bas? Laga soo bilaabo markii madaxweyne ku xigeenka loo doortay ilaa intan u madaxweynaha ahaa wuxuu ku noq noqday degaano badan oo ka mid ah wadanka Somaaliland, Adalse waxa ka celinyaa sataaral xadiid. Waxa jirta sheeko la isla dhex maraayo oo sheegayesa in codka Isaaqo ku filan yahay oo aano u baahnayn Adal. Waxase maluhu ku jiraa in u aaminsan yahay: dameeri isku halays ayey hooyadeed dabada uga nuugtaa ama Adal ha ii joogte e kuwa kale soo budli.
Aduunka mala doortaa qof jooga oo hadana maqan? Sidey u dhici kartaa in loo codeeyo maqane jooga? Sidey u dhici kartaa nin ku yasaaya u code? Madaxweyne Rayaale hadduu dadka reer Adal u haysto doqmo, jaahillo, iyo xoolo waa in u ogaadaa in ay maanta fooli timid oo ay gudda qarsiini hadhay. Dadka reer Adal waxay hadal hayn u lahaayeen: waa Madaxwene e ha iska noolaado. Maanta reer Adal waxay taagan yihiin waar ninkan la inagu tafaafulay ee ina aasay muxuu ahaa?
Madaxweyne, hadaad u haystay in ay reer Adal seexdeen, way soo jeedaan. Waxay og yihiin in aad ka maarantay oo nolasha inta kuu hadhay aad meel ku hubsatay wixii aad ku noolaan lahayd iyo halkaad ku noolaan lahaydba aad meelaysay laakin aanad ku noolaan kareyn dhexdooda. Waxa soo shaac baxay in aad la kulantay dad ka mid Samaroonka, hase yeeshe aad beenaysay kulankaasi inta aad ku faani lahayd. Taasi waxay ku tusaysaa in aad dad kale u xidhan oo aad iska dhisaysid.
Madaxweyne, ma waxaan kuu haysanay mise waxad noqotay. Waxan kuu haysanay nin dhabar jabinta iyo wardoonka ku dheereeya, laakin waxaad noqtay ri’ dhukani col iyo abaar midna ma oga. Hadaanad kala garanayn codowgaa iyo sadiiqaaga, ka ku difaaca iyo ka kaa soo horjeeda iyo ka kuu maqan iyo ka kugu soo maqan, reerna ma masil kartid, dalna ma maamuli kartid, ka isku kaa haleeyaana waa ku kaa daran.
Maanta cabsida iyo kala daadsanaanta Samaroon ku nool yahay adaa u sabab ah. Waayo, adoo wadan dhan oo amni leh u madax ah, ayaad kari wayday in aad soo qabato dadka dhibaatada iyo dilka gaysanaya iyo kuwa qas ka dhex wada ummada ee dhiig yacabka noqday. Waa nasiib daro in dadkaagii maanta cabsi uga kala gudbi laayihiin magalooyinka dalka. Waxaad maanta u waydiisato cod uma aragno arin kaa dhab ah ee waxaan u aragnaa baroor diiq ad u ooyayso dad aad cuntay bari hore. Waxaad ka hesho adaa ka sheekeyn doona ee ha ku daalin doorasho.
This entry was posted on January 6, 2010 at 4:01 pm	and is filed under Articals. Tagged: Articals. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.